के साँच्चै ‘हट लेमन’ पिउँदा तौल घट्छ ? – Nepal Press
के साँच्चै ‘हट लेमन’ पिउँदा तौल घट्छ ?
२०७८ साउन ५ गते १२:३७
काठमाडौं । तातो पानीमा केही थोपा कागती हालेर ‘हट लेमन’ भन्दै पिउनुलाई शरिरको तौल घटाउने अचुक उपायका रूपमा लिने ट्रेन्ड बढ्दै छ । हामीलाई दैनिक जीवनमा भेट हुने धेरैले हट लेमन तौल घटाउने उत्तम उपाय भन्दै सुझाइरहेका हुन्छन् ।
तर, साँच्चै यसले तौल घटाउँछ त ?
चर्चित भारतीय न्युट्रिसियोनिस्ट किनिता कडाकियाका अनुसार तातो पानीमा भिटामिन ‘सी’को मुख्य स्रोत- कागती हालेर पिउँदा शरिरको बोसो पग्लिन्छ भन्नु मिथ्या बाहेक केही होइन ।
‘यदि तौल घटाउन यति सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो भ्रम चाँडै तोड्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
अमेरिकी स्वास्थ्य समबन्धी अनलाइन- हेल्थलाइनका अनुसार तौल घटाउनका लागि हट लेमन पिउनु र सामान्य पानी पिउनुमा केही फरक छैन । तर, यसलाई हाइक क्यालोरी ड्रिङ्क्सको स्थानमा भने प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले केही हदसम्म तौल घटाउनमा मद्दत गर्न सक्छ ।
हट लेमन पिउनुको फाइदा तौल घटाउनु नभएर हाइड्रेट रहनका लागि र छालाको सुरक्षाका लागि पनि प्रभावकारी हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । कागतीमा हुने भिटामिन ‘सी’ले छालामा आउने रिङ्कल तथा सुख्खापन कम गराउँछ र घामबाट छालामा हुने क्षति पनि कम गर्छ ।
प्रकाशित: २०७८ साउन ५ गते १२:३७